နားခိုရာ: Shochu IIchiko ..... great !
Shochu ဆိုတာက အရက်အမျိုးအစား၊ IIchiko ဆိုတာက Brand လား နံမည်တခုခုဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ (သိပ်နားမလည်ဘူး သိသူများ comment ရေးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် thank you ပါခင်ဗျာ..) ဂျပန် အရက်ဖြူပဲဆိုကြပါစို့။ ကိုရဲ့နဲ့ မောင်ဝင်းထိန်တို့ အစည်းအဝေးကအပြန် ၀ယ်ပြီး တကူးတက သယ်လာပေးတာ။ Packing လုပ်ထားတာလေးကလည်း သဘောကျစရာ။ စက္ကူဗူးဆိုတော့ ၂လီတာဆန့်ပေမဲ့ သိပ်ဝန်မကျယ်ဘူးပေါ့။
သူတို့၂ယောက်က အခုပြောတဲ့ Shochu IIchikoရယ်၊ အရသာခပ်ပျော့ပျော့ ဆာကေးတစ်လုံးရယ် နှစ်လုံးဝယ်လာတာ။ ဒါနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စုပြီးသောက်ကြတာပေါ့။ နေရာကလည်း ထုံးစံအတိုင်းပဲ မရိုးနိုင်သော Friendship ပေါ့။ ဆာကေးကတော့ ဒီက ခပ်ပျော့ပျော့ ခေါင်ရည်အရသာမျိုး။ ဒါပေမဲ့ အနံ့လေးက သင်းသင်းလေးရယ်။
Shochu ကိုစသောက်တဲ့ အချိန်မှာ တစ်ငုံတည်းနဲ့ တော်တော်သဘောကျသွားတယ်။ အရက်ဖြူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကောက်ညှင်းလိုလိုအနံ့လေးက သင်းလို့။ လည်ချောင်းထဲအ၀င်ကလည်း ခပ်ပြင်ပြင်းလေးနဲ့ ။ ဒါပေမဲ့ သိပ်ပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ကလည်း နဂိုကတည်းက ဘီအီးကြိုက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ဒီမှာထုတ်တဲ့ ဘိန်းအစားထိုး ပန်းဂျုံနဲ့ချက်တဲ့ ဆိုဘာရှုးဆိုလား အဲဒါနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် တူပေမဲ့ အနံ့နဲ့ အရသာကတော့ တစ်ခြားစီပဲ။ သူကအများကြီး ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဘာမှမရောပဲ ရေခဲလေးနဲ့ သောက်ရုံပဲ။
ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့တစ်သိုက်လဲ မာန်တက်ပြီး ကုန်အောင်ဆော်မဟဲ့ဆိုပြီး သောက်ကြပါလေရော။ စာရင်းချုပ်လိုက်တော့ ညအိမ်ပြန်အရောက်မှာ ရုံးက ပြန်ယူလာတဲ့ DVDအထုတ် ဘယ်နားရောက်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး။ ကောင်းရော။ Hero season2ရယ် အသစ် ၃ခွေရယ် ...နှမြောလိုက်တာလွန်ပါရော။
အဲဒီညက ဆာကေးက ကုန်သွားပေမဲ့ Shochu က သုံးလေးခွက်စာလောက်ကျန်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ စက္ကူဗူးလေးက အပြန်မှာ ကျွန်တော်အိမ်ပါလာရော။ ဒါနဲ့ နောက်နေ့ညနေမှာ Tennis ပွဲကြည့်ရင်း ဆက်သောက်တာပေါ့။ သုံးလေးခွက်စာလောက် ကျန်သေးတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ စက္ကူဗူးလေးကို ရေခဲသေတ္တာထဲ အေးစိမ့် နေအောင် အအေးခံပြီးသောက်တာဗျ။ oops.... အခုရေးနေရင်းတောင် ထပ်သောက်ချင်လာရော။ ရန်ကုန်မှာတော့ နည်းနည်း ရှာရခက်မလားမသိ။ အင်းယားလမ်းက Jyanko မှာတော့ ရနိုင်လောက်မလားမသိ ဘူး ....
Posted by little moon at 12:35 PM
It is good writing , but do not show Ko Thein, he will get angry.
to the article there is stationaryaquestion as you did in the fall efflux of this request www.google.com/ie?as_q=pacestar wizflow professional 6.0 ?
I noticed the catch-phrase you have not used. Or you functioning the pitch-dark methods of development of the resource. I possessaweek and do necheg